ओली Rajdhani News ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आइरहेको शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ ।
फागुन २३ गते, २०७६ १६:३५ मा प्रकाशित
नेकपा सचिवालयलाई ओलीका पाँच सन्देश
अहिले वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउनेभन्दा पनि युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीभित्रै षड्यन्त्र भएको छ । यसमा केही व्यापारी पनि मिलेका छन् । सचिवालय पनि त्यसैको सिकार भएको हो । तपाईंहरूले पनि बुझ्दै नबुझी
फागुन १५ गते, २०७६ १०:५३ मा प्रकाशित
ओली पक्षधर नेताहरूकाे ‘गोप्य’ बैठक ! के भयो कुराकानी?
पार्टी र सरकार आलोचित बन्दै गएपछि रक्षात्मक अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरूले ‘रणनीतिक’ बैठक गरेका छन्। काठमाडौंको गौशालास्थित मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यालयमा भएको भेलामा सरसकार र पार्टीको
माघ २८ गते, २०७६ ०७:४६ मा प्रकाशित